Haydarpaşa Gar Owuwu Banyere Anya Maka Anya | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulElere Haydarpaşa train Train Station Maka Oge mbu
05 / 12 / 2019 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, VIDEO
N'ime ọdụ ụgbọ oloko Haydarpaşa nke Oge mbu; Na 2010, ọrụ mweghachi nke Ọdụ Ragbọ Mmiri Haydarpaşa, nke mere ka ọkụ na-ere n’elu ụlọ ma taa ahụhụ nke ukwuu, ka emechara nke ukwuu. Maka oge mbụ ọnọdụ kachasị ọhụrụ nke ụlọ ọdụ TRT News Ọ na-ele ya.
Ọdụ ụgbọ oloko Haydarpaşa abụrụla otu n'ime akara kachasị mkpa nke Istanbul kemgbe mmalite nke 1908. Ọkụ dị na 2010 mebiri emebi nke ukwuu. N'ihi oru Marmaray, a kwụsịrị ọrụ ụgbọ oloko na 2012.
Garda anọwo na-arụ ọrụ mweghachi ruo ọtụtụ afọ. Ugbu a, agụchaala ọmụmụ ndị ahụ.
Ọdụ ụgbọ oloko Haydarpaşa ga-emeghere ndị njem ya ụzọ dị ka o siri me. A ga-ebute ụzọ maka ụgbọ oloko dị ọkụ, ikike fọdụrụnụ ka a ga-eji maka ụgbọ oloko dị anya.
Ebe a na-echere, ụlọ ịkwụ ụgwọ ụlọ, ihe mkpuchi mgbidi, ọnụ ụzọ osisi, ihe ndozi ụlọ anaghị edozichara anya. N'elu ụlọ 2010 na-ere ọkụ, arụchaala ọrụ niile.
Ihe omumu ihe omumu nke ugbo di na Gard na ano n’iru. A na-atụ anya na a ga-emeghe ọdụ a na njedebe nke afọ na-esote ya n'ihi mbọ a rụrụ ya n'ụzọ ziri ezi. Mgbe ụbọchị ahụ rutere, Haydarpaşa Train Station ga-enwe ụbọchị ochie ya ọzọ.
Akuko Elif Akkuş - dike Marine
Buildinglọ Ọdụ dị na Sakarya ka dị ebe ahụ, n'etiti Buildinglọ Ọdụ na Ọgbọ Ọhụrụ…
Nleba anya n’ozi: Ndozigharị na nhazi ala nke Niğde Station, Niğde Logistics…
Achọpụta ụzọ ụgbọ ala Pyongyang nke dị North Korea na mbụ
A na-elele Osimiri Eurasia Tunnel maka oge mbụ
Igosi Ego Okike: A ga-ewuli ikpo okwu ike n’elu ulo (Malatya mpaghara ụlọ…
Nkwupụta Obi Ụtọ: Ụlọ Ọrụ Garage Na-arụ Ọrụ na Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ Ụlọ Ọrụ
Mmezi nke çlọ Biçerova Station na Menemen Station Owuwuala Ala…
Kedu ihe ga-abụ ọdụ ụgbọ okporo ígwè Haydarpaşa?
Ntụle na-atụ egwu: Nzuzu zuru ezu nke Ụlọ Ọkụ Haydarpaşa
Achịkọta obiọma maka nụchaghachi zuru ezu nke ụlọ ọrụ Haydarpaşa nakọtara
A kwadoro obiọma maka nhazigharị zuru ezu nke ọdụ ụgbọ okporo ígwè Haydarpaşa
Nkwekọrịta aka na ụlọ ọrụ ahụ meriri obi ụtọ maka nhazigharị zuru ezu nke ụlọ Haydarpaşa Gar
Haydarpaşa Train Station mweghachi ọrụ mma
TCDD kwuru okwu banyere mweghachi nke Ụlọ Ọrụ Haydarpasa
Nzuko nzuko sayensi 3 mere maka nwughari nke ulo Haydarpaşa Gar
N'ime ọdụ ụgbọ oloko Haydarpaşa